Super Admin – Page 2 – Filimside.net
Articles by Super Admin
Ma ogtahay inay Sanjay Dutt iyo Jackie Shroff ka dambeeyeen inuu Salman Khan maanta magac weyn ku yeesho fanka India?
Salman Khan hadda wuxuu ka mid yahay xiddigaha hogaanka u ah shirkadda aflaanta dalka India ee Bollywood Film Industry. Si kastaba ha ahaatee, bilowgii xirfaddiisa jilliinka Salman Khan waxaa soo maray waqti adag sida ku […]
SALMAN KHAN: “Haddii aad ku guuldarreysato jaceylka waa nasiib xun tahay”
Baraha bulshada waxaa qabsaday sawirro shidan oo ay isla galeen Salman Khan iyo Katrina Kaif kuwaasoo majalad loogu talogalay. Katrina Kaif iyo Salman Khan ayaa shan sanno ka dib shaashadda ku midoobi doona waxaana mideynaya […]
RANVEER SINGH: “Maalin walba 15 jeer ayaan iska raadiyaa google-ka”
Ranveer Singh wuxuu ka mid yahay jillaayaasha door walba kasoo bixi kara ee ka xamaasha Bollywood. Sannadka soo aadan Ranveer Singh wuxuu ka shaqeyn doonaa aflaan xiiso leh, sida filimka Zoya Akhtar ee Gully Boy […]
Wiil iyo gabar saaxiibo ah oo dhimashadooda si toos ah ugu baahiyey adduunka (Warbixin yaab leh)
Gabar yar oo quruxleey ah ayaa waxay adduunka si toos (Live ah) ugu baahisay dhimashadeeda. Gabadhaan dhallinyarada ah iyo wiil lagu sheegay inuu yahay saaxiibkeed ayaa waxay si xowli ah u wadeen gaari iyagoo cabsan, […]
Haweeneey dhimatay oo nolol kusoo laabatay iyadoo aaskeeda lagu jiray, ka dibna maxaa dhacay?
Haweeneey 59 sanno jir ah taasoo u dhalatay dalka Morocco oo ay dhakhaatiirtu sheegeen inay dhimatay, ayaa soo naaxday ka dibna u qeylo dhaamisay deriskeeda oo aaskeeda ku jiray, wargeys laga leeyahay dalka Morocco ayaa […]
FOOLXUMO: Nin u dhashay India oo xaaskiisa ka adeejiyey 7 nin kuwaasoo qaabkii ugu xumaa ula dhaqmay
Sida laga soo xigtay shabakadda The Times of India, nin ayaa wuxuu u ogolaaday 7 ka mid ah saaxiibadiisa oo cabsan inay kufsadaan xaaskiisa. Wixii intaas ka dambeeyeyna, todobadaas ragga ayaa hal mar ku shamuumay […]
Laba wiil oo walaalo ah oo kala garan waayey xaasaskooda – hadda waxay qaadi doonaan tallaabadaan si aysan markale isugu qaldin!
Asxaabta iyo qoyska ayaa la yaabay cabashada ka imaaneysa wiilashooda ka dib markii ay guursadeen laba gabdhood oo mataano ah oo aan sinnaba loo kala aqoon – waxayna haatan ku sameyn doonaan qalliin si ay […]